I-Barn Retreat @ Shilo Farm - kufutshane nePortsmouth - I-Airbnb
I-Barn Retreat @ Shilo Farm - kufutshane nePortsmouth
Uvimba sinombuki zindwendwe onguAmylyn & Jonas Zev
UAmylyn & Jonas Zev yi-Superhost
IBarn Retreat yindawo ekhethekileyo yokuhlala kwindawo elungiswe kakuhle ngaphakathi kuvimba wembali.
Inomtsalane wenkulungwane ye-18, iShilo Farm inikezela ngeendawo zokuhlala ezitofotofo ezihlaziyayo nezilula engqondweni. Indlela elibonakala ngayo ikhaya liye lachazwa njengelihonjiswe ngendlela esemagqabini ibe iindonga zethu zigcwele ingqokelela ekhethekileyo yobugcisa bokuqala ukuze kukhuthazwe kuze kucingwe.
IBarn Retreat lithuba elikhethekileyo lokuhlala kwindawo elungiswe ngokugqibeleleyo (etofotofo kwi-square feet eziyi-500) kuvimba. Akukho nto ingahoywanga xa kwakusenziwa le ndawo; ukusuka kwindlela yamatye yomlambo eyayifakwe kumgangatho we-cork ukuya kwi-shower efakwe ziindonga ezimbini zemithi yenkomo evunwa kule ndlu. Kwinqanaba lokuqala kukho indlu yangasese eyenziwe ngendlela ekhethekileyo eyakhiwe yaza yenziwa ngecedar ebomvu yasentshona kunye ne-burl yenkomo evunwa ekuhlaleni. Kukho isitovu se-propane sobo busuku obubandayo kunye ne-air conditioner yezo zinomphunga. Kukho ifriji encinci, i-toaster, isinki yesepha kunye nepleyiti eshushu yeti/yekofu. Sinikezela ngamaqanda aphilayo, ioyile, iziqholo, ubisi, ibhotolo, kunye nezinto zokwenza ikofu neti.
Amalungiselelo okulala: Kukho ibhedi enkulu yokulala kwinqanaba lesibini. Kwelo gumbi kukho ii-loft ezimbini ezinomatrasi ababini. Iloft ingena ngeleli ize ijonge ibhedi enkulu. PHAWULA: Ileli iyanyuka kwaye ilungele abantwana abayi-7 ukunyuka. Umda wobunzima bendawo ye-loft ziipawundi eziyi-250. Ngokufanelekileyo, iindawo ze-loft zilungele abantu abadala abancinci okanye abantwana njengoko zifana nezikhitshane. Nceda uqaphele oku kube kanye xa ubhukisha indawo yokuhlala.
Ijikelezwe yimithi eyahlukahlukeneyo, iShilo Farm yabucala, ipholile. Sinabamelwane, kodwa bafihlwe emithini. Sibuyile endleleni, nto leyo eyenza kube mnandi ukuba wedwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Amylyn & Jonas Zev
Sinokusebenzisana kakhulu okanye kancinci kangangoko ufuna. Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kwaye siya kukuvuyela ukukunika amacebiso ngale ndawo...kodwa ukuba iyimfihlo oyinqwenelayo...kunokuba yeyakho! Sazise nje!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Eliot